ဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျသှယျခွငျး | Rev.U Min Lwin
← မိခငျဟူသညျ . . .
အလိုတျောနှငျ့ညီသော ကိုးကှယျခွငျး →
5 comments on “ဘုရားသခငျနှငျ့ဆကျသှယျခွငျး”
Naw glady on 09/05/2018 at 12:53 PM said:
ကျွန်မ ဟေဗြဲသြဝါဒ စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ပါတယ်. ဝေငှပေးစေလိုပါ၏။
ဦးမင်းလွင် on 23/05/2018 at 8:10 AM said:
ဟေဗြဲ သြ၀ါဒစာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော် အားလပ်တဲ့အခါ ရေးသားတင်ပြပေးပါမယ်။ ဒီ blog လေးကို လာရောက် လည်ပတ်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Naw glady on 23/05/2018 at 9:49 AM said:
Kpsteven Hung on 22/05/2018 at 6:45 PM said:
> Den 8. maj 2018 kl. 07.30 skrev Rev.U Min Lwin :
ဦးမင်းလွင် on 23/05/2018 at 8:11 AM said:
လာရောက် လည်ပတ်လို့ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။